AH: ဘာမြင်ရလဲ? - ၂
ဘယ်နှစ်ယောက်လဲ ရေတွက်ကြည့်ပါ... ၁၀ စက္ကန့်ခြားတစ်ခါ
ဒီစာကို မြင်ချင်ရင်တော့ ကွန်ပျူတာကနေခွာ.. နောက်ကိုဆုတ်... ခပ်ဝေးဝေးကိုသွား....
မသောက်ပဲ မူးချင်ရင် ကြာကြာလေးကြည့်....
အပေါ်ကပုံကြည့်လို့ မမူးသေးရင် ဒါကို ထပ်ကြည့်....
အဲ့ဒါမှ မမူးသေးရင် ဟောဒါကို ထပ်ကြည့်.....
Posted by AH at 2/22/2012 10:27:00 AM
ငထွဋ် February 22, 2012 at 12:06 PM
စံပယ်ချို February 22, 2012 at 2:24 PM
မြင်းတွေဘယ်နှစ်ကောင်လူတွေဘယ်နှစ်ယောက် ရှိတာ ကို
ဟန်ကြည် February 22, 2012 at 9:23 PM
ဘီယာသောက်တာတောင် ဒီလောက်မမူးဘူး...အဲဒီတော့ ဘီယာဖိုး ပေးထားခဲ့လိုက်မယ်ဗျာ...နောက်ပါ့...
နောင်တော်ရယ် ..... blog တွေ အများကြီး ဖတ်ဘူး ပါတယ် ....
နောင်တော် post ဖတ်မိမှ ပဲ ထိုင်နေရင်း နောက်ကို ပြေးလိုက်
ရှေ့ ပြန်တိုး လိုက် .... နဲ့.... နောက် ဆုံး မှုးပြီး comment တောင် တော်တော် ရေးယူရတယ် .. ဗျာ ..
တကယ်ကို အမှတ်တရပါပဲ ...ဗျာ . ... ။
ပထမ ပုံနဲ့ တင် စမူးနေပြီ ..
ကောက်လား ဖြောင့်လား တော့ မသိဘူး ..
ကြည့်လေ .. ကြည့်လေ .. အဲ့ဒါကြီးက ရွှေ့နေသလိုလိုပဲ .. :D
မြေခွေးက ၁ ကောင်
မြင်း က ၅ ကောင်
မျက်နှာက ၁၀ ခု
တော် ပြီ .. မူးတယ် ..
နေ၀သန် February 23, 2012 at 12:32 PM
မျက်လုံးကိုက်ပါတယ်ဆို.. ဟိုမျက်နှာပဲသေချာရည်မိတယ်.. ၉ ခု.. မှားတော့လည်းသိဘူး..း))
...အလင်းစက်များ February 23, 2012 at 5:10 PM
အားပါး ကြည့်လေရာ အပြာဝိုင်းကြီးပဲ မြင်နေတော့တယ်။ သေဘီဆှာ
မိုးဇက် February 24, 2012 at 3:31 PM
တော်တော်လေး မူးသွားတယ် ...
နောက်ဆုတ်ပြီးတော့ ကြည့်ရသေးတယ် ဗျာ ....
ktm May 21, 2012 at 1:35 PM
မူးသွားတာပဲ ဟွန့် နဂိုကမှ မူးကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေတာကို.......လူဆိုး
ktm May 21, 2012 at 1:41 PM
PHYOLAY August 2, 2012 at 1:28 AM
Unknown January 19, 2013 at 6:13 AM
share thwear tal ,bro AH
Thwin May 26, 2013 at 11:02 PM
မျက်နှာက ၁၀ ခု..။ အကောက်လား၊ အဖြောင့်လား မေးကတည်းက မူးနေတာ...။ ထပ်ကြည့်ဆိုတော့လည်း ကြည့်လိုက်တာပဲ...။ တော်တော်လေး များသွားတယ်..။